သင့်အချစ်ရေး ကံကြမ္မာ ကောင်းမကောင်း သိနိုင်ဖို့ ( အခုပဲကြည့်လိုက်ပါ ) - Padaethar
အချစ်ရေးကံကြမ္မာ ကောင်းမကောင်း သိနိုင်ဖို့
ဒီနှစ်ထဲမှာ အချစ်ရေးပြေလည်မလား၊ ချစ်သူနဲ့ အဆင်ပြေမလား၊ ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်ဖြစ်မလား ချစ်သူအသစ်တွေ့ဦးမလား ချစ်သူနဲ့ ကွဲမလားဆိုတာတွေ မသိချင်ဘူးလား အဲဒီလိုနှလုံးသားရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေ ကြိုတင် သိချင်သူတွေအတွက် သက်ရောက် ဟောကိန်းလေးတွေကို ပြောပြပါ့မယ်။
တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျ။ လက်ဆန်းဗေဒင် နားလည်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဘယ်သက်ရောက်လဲသိပေမဲ့ ဗေဒင်နဲ့မရင်းနှီးရင်တော့ တွက်ပုံတွက်နည်းပြောပြပါ့မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အသက်နဲ့မွေးနံသိဖို့တော့ လိုမှာပါ။ ဒါတွေသိပြီးရင်တော့ သိချင်တာလေးတွေ ကြိုတင်ပြီးသိနိုင်ပါပြီ၊
တစ်ခုပြောချင်တာက မိမိက ဒီနေ့အသက်၂၀ တင်းတင်းပြည့်ပြီဆိုပါစို့ဗျာ။ မနက်ဖြန်ဆို အသက် ၂၁ထဲရောက်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အသက်၂၁နဲ့ တွက်ရမယ်ပေါ့။
တွက်ကြည့်ကြရအောင် – ပထမဦးစွာ သက်ရောက် ၈မျိုးကို အရင်သိရပါ့မယ်။ ဒါမှလဲ ဘယ်သက်ရောက်မှာ ဘာဖြစ်မယ်သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၁။ တနင်္ဂနွေ သက်ရောက်
၂။ တနင်္လာ သက်ရောက်
၅။ စနေ သက်ရောက်
ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုသိထားပြီး ဖြစ်တဲ့အတိုင်း အဲဒီအသက်ကိုတည်ပြီး (၈) နဲ့ စားရမယ်။ ရလာဒ်ကိုသုံးစရာမလိုဘူး။ အကြွင်းကိုပဲသုံးရမယ်။ တကယ်လို့ ၈နဲ့စားလို့ပြတ်ရင် ၈ကြွင်းတယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်ယူဆရမယ်။
ကိုယ့်အသက်ကိုတည်ပြီး ၈နဲ့စားလို့ရတဲ့ အကြွင်းတန်ဖိုးအတိုင်း မိမိမွေးနံကစပြီး ရေတွက်သွားရမယ်။ရေတွက်သွားရမယ့်အကွက်တွေကို တစ်ကွက်ပြီးတစ်ကွက်ရေတွက်ရာမှာ နာရီလက်တံရစ်ပတ်တဲ့အတိုင်း လက်ယာရစ် ရစ်ပတ်သွားရမယ်။
အကြွင်းအရေအတွက်စေ့သွားတဲ့နေ့က မိမိရဲ့ သက်ရောက်ပါ။သက်ရောက်ဟောကိန်းတွေ အကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်ရင် ဒီနှစ်ထဲမှာတွေ့ကြုံရမယ့် နှလုံးသားရေးရာ ကိစ္စလေးတွေကို သိရပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာလေး တခုလောက် တွက်ကြည့်ရအောင်၊ အသက် ၂၀ – ရှိတဲ့ ကြာသပတေးသမီးအတွက် တွက်ကြည့်ရင် -၂၀- ကို ၈ – နဲ့စားယင် ၄ – ကြွင်းမယ်။
ကြာသပတေးသမီးကို အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အဌလဂ်ဂြိုဟ်ခွင်ပုံအတိုင်း ကြာသပတေးကနေ နာရီလက်တံအတိုင်းစရေရမယ်။
ဒါဆို ၄- ကွက်မြောက်တဲ့အကွက်ဟာ တနင်္ဂနွေ မဟုတ်လား။ဒါကြောင့် သူ့အတွက်က တနင်္ဂနွေသက်ရောက် ဟောကိန်းတွေကိုကြည့်ရ ပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ နောက်တစ်ခု အသက်၂၇ နှစ်ရှိတဲ့ အင်္ဂါသားသမီးဆို့ပါစို့။၂၇ကို ၈နဲ့စားတော့ ၃ကြွင်းတယ်။ အကြွင်းအတိုင်း အင်္ဂါကနေ အောက်ပါပုံအတိုင်း နာရီလက်တံပုံစံ စတင်ရေတွက်တော့ ….
အင်္ဂါက တစ် ၊ဗုဒ္ဓဟူးက နှစ် ၊ စနေက သုံးပါ။ အကြွင်းက ၃ဖြစ်တဲ့အတွက် စနေသက်ရောက်ထဲမှာပါ။ ဒါကြောင့်စနေသက်ရောက် ဟောကိန်းလေးတွေဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာ….
ကဲသဘောပေါက်ပြီဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွက် ချက်ပြီးဟောကိန်းတွေသာဖတ်ကြည့်ပေတော့…..
ဒီနှစ်ထဲမှာ အချစ်ရေးကံသိပ်မကောင်းပါဘူး၊ ကိုယ်ကစွဲစွဲလမ်းလမ်းချစ်နေပေမယ့် သူကကိုယ့်အချစ်ကိုဂရုမစိုက်ဘူး၊ ကိုယ့်ရဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်ရပ်တွေဟာ သူ့အတွက်ပျော်ရွှင်စရာတခုလို ဖြစ်နေတက်ပါတယ်။
သူ့ကို ကိုယ်ကချစ်နေမှန်း စွဲလမ်းနေမှန်းလဲ သူသိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူကကိုယ့်ကို ချစ်ကြည့်လို့မရပဲဖြစ်နေတယ်။ သူငယ်ချင်းအဖြစ် ခင်တာထက်မပိုနိုင်ဘူး။ ကိုယ့်နဲ့သူ့အကြားမှာထူးခြားတဲ့ သံယောဇဉ်ရှိမနေနိုင်ဘူး။
ဒါကလဲ အကြောင်းရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကစွဲလမ်းနေတဲ့သူ့မှာ သံယောဇဉ်ထားရမယ့်ရှိပြီးသား ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါမှမဟုတ်လဲ စေ့စပ်ထားတဲ့လူ၊ လူကြီးချင်းသဘောတူထားတဲ့လူ ရှိနေလို့ပါ။
ဒါပေမယ့်အားမလျော့ပါနှင့်၊ မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာ သံယောဇဉ်သမားတွေရဲ့ ကျင့်ဝတ်တစ်ခုပဲ မဟုတ်လား။
ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုလေးတွေဟာ အလိုလိုနေရင်း နာမည်ကျော်ကြားနေတတ်တယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီနှစ်ထဲမှာ စန်းပွင့်နေတဲ့အတွက် နှလုံးသားရေးရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သောကကင်းဝေးရမယ်၊ ချစ်သူနဲ့အတူ တွဲတွဲသွားသွား ရှိတာကြောင့်သာယာကြည်နူးရမယ်။
ချစ်သူဟာ ကိုယ့်အလိုကိုလိုက်မယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ခါ တစ်ခါစိတ်ကောက်တတ်တယ်၊ အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးဖြစ်စေ၊ အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးဖြစ်စေ၊ စိတ်ကောက်တာမျိုးပေါ့။ သတိထားစရာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်၊
ရေကန်နားမြစ်ကမ်းနံဘေးနားမှာတေ့ာ အတူသွားသွားပြီး မထိုင်ပါနဲ့၊ မမျှော်လင့်ပဲအန္တရာယ်တစ်ခုခုတွေ့ ကြုံရတတ်ပါတယ်၊ ချစ်သူကကိုယ့်ကို အဖိုးတန်လက်ဆောင်တွေပေးတတ်ပါတယ်။
အမှတ်တရသိမ်းထားသင့်တဲ့လက်ဆောင်တွေမို့ အဲဒီအတွက်ဝမ်းသာကြည်နူးရပါမယ်၊ ဘာပဲပြောပြော တနင်္လာသက်ရောက်နှစ်ဟာ နှလုံးသားရေးရာ ကံကောင်းတဲ့နှစ်ပါပဲ။
ကိုယ့်ကိုမကြည်ဖြူတဲ့မိန်းကလေးတစ်ချို့ကြောင့်(ညီမတို့အတွက် ဆိုရင် ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ယောက်ကြောင့်) အချစ်သောကပွားရ တတ်ပါတယ်၊ ချစ်ခရီးရဲ့အနှောက်အယှက်တွေကို ဒီနှစ်ထဲမှာ ခဏခဏတွေ့ရမယ်၊
အဲဒီအနှောက် အယှက်တွေကြောင့် ချစ်သူကကိုယ့်ကို အပြစ်မြင်မယ်၊ အပြစ်ထင်မယ်။ ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာ တွေမို့ကိုယ်ကမှန်ရက်သားနဲ့ ရေငုံနှုတ်ပိတ် ဖြစ်နေရတတ်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့တစ်ခြားပြဿနာတွေကလည်း ချစ်သူအတွက် စိတ်မကြည်စရာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်၊
ဒီကြားထဲအခြေအနေအရပ်ရပ်က ချစ်သူရဲ့အလိုကို မဖြည့်စွမ်းနိုင်တာကြောင့် ပိုပြီးသောကပွားစရာလေးတွေဖြစ်လာရတယ်။ အဆုံးမှာတော့သူနဲ့ကိုယ်ဟာချစ် ခရီးကို အတူတွဲမလျှောက်နိုင်တော့ပဲ လမ်းခွဲရတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူရဲ့အမုန်းဒဏ်ကြောင့် ချစ်ဝေဒနာလေး တွေခံစားရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီနှစ်ထဲမှာချစ်ရမယ့်သူနဲ့တွေ့ကြုံနိုင်ပါတယ်၊ သူဟာကိုယ့်ရဲ့အရှေ့တောင်အရပ်ကဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ ပြီးတော့ သူဟာကိုယ့်ကိုသာယာချမ်းမြေ့မှု ပေးစွမ်းနိုင်မယ့်သူ လို့လဲ ယူဆနိုင်ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် သူဟာအလှအပကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်တတ်ပါတယ်၊
ဒါပေမယ့် စိတ်ကူးထက် လက်တွေ့ကို ကြိုက်နှစ် သက်သူဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ ချစ်သူရှိပြီးသား သူတွေအဖို့တော့ ဘာမှထူး ထူးခြားခြား မရှိနိုင်ပါဘူး၊ သာယာချမ်းမြေ့တဲ့အချစ် သက်တမ်းကာလလေးပါ။ အဲတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်၊
တစ်ချိန်က ချစ်ခဲ့ဖူးသူတစ်ယောက်ယောက်ရှိခဲ့ရင်တော့ သူရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုကြောင့် သောကပွားရတတ်ပါတယ်၊ လက်ရှိချစ်သူက သဘောထားကြီးလို့ တော်သေးတာပေါ့။
မိန်းကလေးတွေနဲ့ အစေးမကပ်တဲ့နှစ်လို့ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး၊ တစ်နည်းအားဖြင့် အချစ်ကိုစိတ်မဝင်စားပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်၊ အချစ်ကိုခုံမင် သာယာမိတဲ့စိတ်ထက် ငြီးငွေ့တဲ့စိတ်ကပိုများနေ တတ်ပါတယ်။ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးမယဉ် ချင်တော့တဲ့သဘောပါ။
ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာကတော့ကြုံနေရဦးမှာပါ။ သူများတွေရဲ့နှလုံးသားကိစ္စတွေ၊ ပြဿနာကိစ္စတွေကြားမှာ ကိုယ်ကဓားစာခံဖြစ်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ကသံယောဇဉ် မကင်းနိုင်တဲ့သူတွေကြောင့်ပိုပြီး စိတ်ညစ်ရမယ်၊ ဒါတွေကြောင့်လည်း အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကို ပိုပြီးစိတ်ကုန်လာတာပေါ့။
အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပျော်စရာအကောင်း ဆုံး ကာလပါ။ ချစ်သူနဲ့စိတ်သဘောထားခြင်းတိုက် ဆိုင်ပြီး အပူအပင်မရှိ သာယာကြည်နူးရမယ်၊ ချစ်သူ ဟာ ကိုယ့်အလိုကိုလိုက်မယ်၊ ကိုယ်လုပ်ဆောင်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာပါဝင်ကုညီဆောင်ရွက်လေ့ရှိမယ်။
ချစ်သူထံကလဲ အဖိုးတန်လက်ဆောင်တွေရမယ်။ချစ်သူမဖြစ်သေးယင်လဲ ကိုယ်ကစွဲလမ်းနေ သူရဲ့ခေါင်းညိတ်အဖြေစကားကို ကြားရမယ်၊ ချစ်သူ ဟာကိုယ့်အလိုဆန္ဒကို လိုက်လျောလွန်းတာကြောင့် သတိတရားတော့ရှိရမယ်၊
ချစ်သူအပေါ် စောင့်ထိန်း ရမယ့် သိက္ခာတရားကို စောင့်သိရမယ် မဟုတ်ရင် တော့ကျူးကျူးလွန်လွန်တွေဖြစ်ပြီး စိတ်ညစ်ရပါမယ်၊ ကိုယ်ကထိန်းသိမ်းတာတောင်မှတစ်ခြား မိန်းကလေး တွေရဲ့အဖျက်စကားကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရှိတတ် ပါ တယ်။
ချစ်သူဟာကိုယ်အပေါ်ကိုမကောင်းမြင်နေလိမ့်မယ်၊ သံသယတွေဝင်နေတယ် ဆိုပါတော့၊ သူ့ဆီက မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုခုကြောင့်ဟန်ဆောင်အချစ်နဲ့ ချစ်နေတယ်လို့ထင်နေတယ်လေ။ ဒီတော့ သူက နာကျင်နေလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ကမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေ လုပ်ဆောင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်စေ၊ သူကမကြိုက်တာတွေ ကျူးလွန်လို့ပဲဖြစ်စေ၊ တစ်ယောက် နဲ့တစ်ယောက် ကတောက်ကဆဖြစ်ပြီး မုန်းကြရတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ကိုယ်နှိုက်ကလည်းတခြားအဆင်မပြေစရာတွေ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံနေရတာကြောင့် သူ့ရဲ့ပြစ်တင်ပြောဆိုမှုကို မခံနိုင်ပဲ အတိုက်အခံတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်။ ဒီအတိုက်အခံတွေရဲ့ နောက်ဆုံး ရလဒ်ကတော့ သံယောဇဉ်ကြိုးလေးပြတ်တောက်သွားရခြင်းပါပဲ။
ချစ်သူဆီက အချစ်အဖြေကိုတောင်းခံငံ့လင့်နေသူတွေအတွက်တော့ ဒီနှစ်ထဲမှာ စိတ်ချမ်းသာရမယ့်အဖြေ မရရှိနိုင်ဘူး၊ သူဟာ ကိုယ့်ရဲ့စကားတွေကို မယုံမကြည်ဖြစ်နေသေးတယ်။ ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်တစ်ချို့ကြောင့် အထင်သေးပြီးချစ်ဖို့ မဝံ့မရဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ချစ်နေတဲ့သူဆီက ချစ်စကားအဖြေပေးရနိုင်သလို ညီမတို့အဖို့လဲ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး ချစ်စကားပြောလာတာကို ကြားရမယ်။ တကယ်တော့ ဒီကာလဟာ ချစ်သူနှစ်ဦး အတွက် ပျော်စရာအကောင်းဆုံး သာယာချမ်းမြေ့ဖို့ အကောင်းဆုံးကာလပါ။ ချစ်နေပြီးသူတွေ။
လက်ထပ်ဖို့ တာစူနေကြသူတွေဆိုရင်တော့ ဒီနှစ်ထဲမှာ ထိမ်းမြားဖို့ အခြေအနေပေးတက်ပါတယ်။ ဘယ်လို အနှောင့်အယှက်မျိုးတွေပဲ ရှိနေနေ၊ လက်ထပ်ဖို့စီ စဉ်ထားရင် မလွဲမသွေအောင်မြင်မှာပါ။ချစ်သူဘဝမှာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးရသလို တစ်ဘက်ကလည်း ရာထူးတက်နိုင်တယ်။
စာမေးပွဲတွေ အောင်နိုင်တယ်။ ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေပြီး ပြတ်နိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ခြားလူမှုရေးသောက၊ စီးပွားရေးသောက ပညာရေးသောကတွေ ကင်းစင်နေတာကြောင့် အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးသမျှ အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ချစ်နိုင်ကြပါတယ်။
အားလုံး အဆင်ပြေ ကြပါစေ…credit ; Ref; Sayar Dagon
သငျ့အခဈြရေး ကံကွမ်မာ ကောငျးမကောငျး သိနိုငျဖို့ ( အခုပဲကွညျ့လိုကျပါ )
ဒီနှဈထဲမှာ အခဈြရေးပွလေညျမလား၊ ခဈြသူနဲ့ အဆငျပွမေလား၊ ရညျရှယျထားတဲ့သူနဲ့ လကျထပျဖွဈမလား ခဈြသူအသဈတှေ့ဦးမလား ခဈြသူနဲ့ ကှဲမလားဆိုတာတှေ မသိခငျြဘူးလား အဲဒီလိုနှလုံးသားရေးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ပွဿနာလေးတှေ ကွိုတငျ သိခငျြသူတှအေတှကျ သကျရောကျ ဟောကိနျးလေးတှကေို ပွောပွပါ့မယျ။
တဈခုတော့ရှိတယျဗြ။ လကျဆနျးဗဒေငျ နားလညျတဲ့သူဆိုရငျတော့ ကိုယျဘယျသကျရောကျလဲသိပမေဲ့ ဗဒေငျနဲ့မရငျးနှီးရငျတော့ တှကျပုံတှကျနညျးပွောပွပါ့မယျ။ ကိုယျ့ရဲ့အသကျနဲ့မှေးနံသိဖို့တော့ လိုမှာပါ။ ဒါတှသေိပွီးရငျတော့ သိခငျြတာလေးတှေ ကွိုတငျပွီးသိနိုငျပါပွီ၊
တဈခုပွောခငျြတာက မိမိက ဒီနအေ့သကျ၂၀ တငျးတငျးပွညျ့ပွီဆိုပါစို့ဗြာ။ မနကျဖွနျဆို အသကျ ၂၁ထဲရောကျပွီလို့ဆိုနိုငျပါတယျ။ အဲဒီတော့ အသကျ၂၁နဲ့ တှကျရမယျပေါ့။
တှကျကွညျ့ကွရအောငျ – ပထမဦးစှာ သကျရောကျ ၈မြိုးကို အရငျသိရပါ့မယျ။ ဒါမှလဲ ဘယျသကျရောကျမှာ ဘာဖွဈမယျသိနိုငျပါလိမျ့မယျ။
၁။ တနင်ျဂနှေ သကျရောကျ
၂။ တနင်ျလာ သကျရောကျ
၅။ စနေ သကျရောကျ
ဒုတိယအနနေဲ့ကတော့ကိုယျ့ရဲ့အသကျကိုသိထားပွီး ဖွဈတဲ့အတိုငျး အဲဒီအသကျကိုတညျပွီး (၈) နဲ့ စားရမယျ။ ရလာဒျကိုသုံးစရာမလိုဘူး။ အကွှငျးကိုပဲသုံးရမယျ။ တကယျလို့ ၈နဲ့စားလို့ပွတျရငျ ၈ကွှငျးတယျလို့ပဲ သတျမှတျယူဆရမယျ။
ကိုယျ့အသကျကိုတညျပွီး ၈နဲ့စားလို့ရတဲ့ အကွှငျးတနျဖိုးအတိုငျး မိမိမှေးနံကစပွီး ရတှေကျသှားရမယျ။ရတှေကျသှားရမယျ့အကှကျတှကေို တဈကှကျပွီးတဈကှကျရတှေကျရာမှာ နာရီလကျတံရဈပတျတဲ့အတိုငျး လကျယာရဈ ရဈပတျသှားရမယျ။
အကွှငျးအရအေတှကျစသှေ့ားတဲ့နကေ့ မိမိရဲ့ သကျရောကျပါ။သကျရောကျဟောကိနျးတှေ အကွောငျးကိုဖတျကွညျ့ရငျ ဒီနှဈထဲမှာတှကွေုံ့ရမယျ့ နှလုံးသားရေးရာ ကိစ်စလေးတှကေို သိရပါလိမျ့မယျ။
ဥပမာလေး တခုလောကျ တှကျကွညျ့ရအောငျ၊ အသကျ ၂၀ – ရှိတဲ့ ကွာသပတေးသမီးအတှကျ တှကျကွညျ့ရငျ -၂၀- ကို ၈ – နဲ့စားယငျ ၄ – ကွှငျးမယျ။
ကွာသပတေးသမီးကို အောကျမှာဖျောပွထားတဲ့ အဌလဂျဂွိုဟျခှငျပုံအတိုငျး ကွာသပတေးကနေ နာရီလကျတံအတိုငျးစရရေမယျ။
ဒါဆို ၄- ကှကျမွောကျတဲ့အကှကျဟာ တနင်ျဂနှေ မဟုတျလား။ဒါကွောငျ့ သူ့အတှကျက တနင်ျဂနှသေကျရောကျ ဟောကိနျးတှကေိုကွညျ့ရ ပါလိမျ့မယျ။
ဥပမာ နောကျတဈခု အသကျ၂၇ နှဈရှိတဲ့ အင်ျဂါသားသမီးဆို့ပါစို့။၂၇ကို ၈နဲ့စားတော့ ၃ကွှငျးတယျ။ အကွှငျးအတိုငျး အင်ျဂါကနေ အောကျပါပုံအတိုငျး နာရီလကျတံပုံစံ စတငျရတှေကျတော့ ….
အင်ျဂါက တဈ ၊ဗုဒ်ဓဟူးက နှဈ ၊ စနကေ သုံးပါ။ အကွှငျးက ၃ဖွဈတဲ့အတှကျ စနသေကျရောကျထဲမှာပါ။ ဒါကွောငျ့စနသေကျရောကျ ဟောကိနျးလေးတှဖေတျကွညျ့ပေါ့ဗြာ….
ကဲသဘောပေါကျပွီဆို ကိုယျ့ကိုယျကိုတှကျ ခကျြပွီးဟောကိနျးတှသောဖတျကွညျ့ပတေော့…..
ဒီနှဈထဲမှာ အခဈြရေးကံသိပျမကောငျးပါဘူး၊ ကိုယျကစှဲစှဲလမျးလမျးခဈြနပေမေယျ့ သူကကိုယျ့အခဈြကိုဂရုမစိုကျဘူး၊ ကိုယျ့ရဲ့ အကောငျးဆုံးလုပျရပျတှဟော သူ့အတှကျပြျောရှငျစရာတခုလို ဖွဈနတေကျပါတယျ။
သူ့ကို ကိုယျကခဈြနမှေနျး စှဲလမျးနမှေနျးလဲ သူသိတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူကကိုယျ့ကို ခဈြကွညျ့လို့မရပဲဖွဈနတေယျ။ သူငယျခငျြးအဖွဈ ခငျတာထကျမပိုနိုငျဘူး။ ကိုယျ့နဲ့သူ့အကွားမှာထူးခွားတဲ့ သံယောဇဉျရှိမနနေိုငျဘူး။
ဒါကလဲ အကွောငျးရှိပါတယျ။ ကိုယျကစှဲလမျးနတေဲ့သူ့မှာ သံယောဇဉျထားရမယျ့ရှိပွီးသား ဖွဈနလေို့ပါ။ ဒါမှမဟုတျလဲ စစေ့ပျထားတဲ့လူ၊ လူကွီးခငျြးသဘောတူထားတဲ့လူ ရှိနလေို့ပါ။
ဒါပမေယျ့အားမလြော့ပါနှငျ့၊ မြှျောလငျ့ခွငျးဆိုတာ သံယောဇဉျသမားတှရေဲ့ ကငျြ့ဝတျတဈခုပဲ မဟုတျလား။
ကိုယျ့ရဲ့ လုပျဆောငျမှုလေးတှဟော အလိုလိုနရေငျး နာမညျကြျောကွားနတေတျတယျ၊ ဒါကွောငျ့ ဒီနှဈထဲမှာ စနျးပှငျ့နတေဲ့အတှကျ နှလုံးသားရေးရာနဲ့ ပတျသကျပွီး သောကကငျးဝေးရမယျ၊ ခဈြသူနဲ့အတူ တှဲတှဲသှားသှား ရှိတာကွောငျ့သာယာကွညျနူးရမယျ။
ခဈြသူဟာ ကိုယျ့အလိုကိုလိုကျမယျ၊ ဒါပမေယျ့တဈခါ တဈခါစိတျကောကျတတျတယျ၊ အကွောငျးမရှိအကွောငျးရှာပွီးဖွဈစေ၊ အပွဈမရှိအပွဈရှာပွီးဖွဈစေ၊ စိတျကောကျတာမြိုးပေါ့။ သတိထားစရာတဈခုတော့ရှိပါတယျ၊
ရကေနျနားမွဈကမျးနံဘေးနားမှာတေ့ာ အတူသှားသှားပွီး မထိုငျပါနဲ့၊ မမြှျောလငျ့ပဲအန်တရာယျတဈခုခုတှေ့ ကွုံရတတျပါတယျ၊ ခဈြသူကကိုယျ့ကို အဖိုးတနျလကျဆောငျတှပေေးတတျပါတယျ။
အမှတျတရသိမျးထားသငျ့တဲ့လကျဆောငျတှမေို့ အဲဒီအတှကျဝမျးသာကွညျနူးရပါမယျ၊ ဘာပဲပွောပွော တနင်ျလာသကျရောကျနှဈဟာ နှလုံးသားရေးရာ ကံကောငျးတဲ့နှဈပါပဲ။
ကိုယျ့ကိုမကွညျဖွူတဲ့မိနျးကလေးတဈခြို့ကွောငျ့(ညီမတို့အတှကျ ဆိုရငျ ယောင်ျကြားလေးတဈယောကျယောကျကွောငျ့) အခဈြသောကပှားရ တတျပါတယျ၊ ခဈြခရီးရဲ့အနှောကျအယှကျတှကေို ဒီနှဈထဲမှာ ခဏခဏတှရေ့မယျ၊
အဲဒီအနှောကျ အယှကျတှကွေောငျ့ ခဈြသူကကိုယျ့ကို အပွဈမွငျမယျ၊ အပွဈထငျမယျ။ ဖွရှေငျးလို့မရတဲ့ပွဿနာ တှမေို့ကိုယျကမှနျရကျသားနဲ့ ရငေုံနှုတျပိတျ ဖွဈနရေတတျတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့တဈခွားပွဿနာတှကေလညျး ခဈြသူအတှကျ စိတျမကွညျစရာတှဖွေဈနတေတျတယျ၊
ဒီကွားထဲအခွအေနအေရပျရပျက ခဈြသူရဲ့အလိုကို မဖွညျ့စှမျးနိုငျတာကွောငျ့ ပိုပွီးသောကပှားစရာလေးတှဖွေဈလာရတယျ။ အဆုံးမှာတော့သူနဲ့ကိုယျဟာခဈြ ခရီးကို အတူတှဲမလြှောကျနိုငျတော့ပဲ လမျးခှဲရတတျပါတယျ။ ခဈြသူရဲ့အမုနျးဒဏျကွောငျ့ ခဈြဝဒေနာလေး တှခေံစားရရှိနိုငျပါတယျ။
ဒီနှဈထဲမှာခဈြရမယျ့သူနဲ့တှကွေုံ့နိုငျပါတယျ၊ သူဟာကိုယျ့ရဲ့အရှတေ့ောငျအရပျကဖွဈဖို့မြားပါတယျ။ ပွီးတော့ သူဟာကိုယျ့ကိုသာယာခမျြးမွမှေု့ ပေးစှမျးနိုငျမယျ့သူ လို့လဲ ယူဆနိုငျပါတယျ၊ အထူးသဖွငျ့ သူဟာအလှအပကွိုကျနှဈသကျသူဖွဈတတျပါတယျ၊
ဒါပမေယျ့ စိတျကူးထကျ လကျတှကေို့ ကွိုကျနှဈ သကျသူဖွဈတတျပါတယျ၊ ခဈြသူရှိပွီးသား သူတှအေဖို့တော့ ဘာမှထူး ထူးခွားခွား မရှိနိုငျပါဘူး၊ သာယာခမျြးမွတေဲ့အခဈြ သကျတမျးကာလလေးပါ။ အဲတဈခုတော့ရှိပါတယျ၊
တဈခြိနျက ခဈြခဲ့ဖူးသူတဈယောကျယောကျရှိခဲ့ရငျတော့ သူရဲ့ စှမျးဆောငျမှုကွောငျ့ သောကပှားရတတျပါတယျ၊ လကျရှိခဈြသူက သဘောထားကွီးလို့ တျောသေးတာပေါ့။
မိနျးကလေးတှနေဲ့ အစေးမကပျတဲ့နှဈလို့ဆိုရငျ မှားမယျမထငျပါဘူး၊ တဈနညျးအားဖွငျ့ အခဈြကိုစိတျမဝငျစားပဲဖွဈနတေတျပါတယျ၊ အခဈြကိုခုံမငျ သာယာမိတဲ့စိတျထကျ ငွီးငှတေဲ့စိတျကပိုမြားနေ တတျပါတယျ။ အခဈြနဲ့ပတျသကျပွီးစိတျကူးမယဉျ ခငျြတော့တဲ့သဘောပါ။
ဒါပမေယျ့ မိနျးကလေးတှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈစရာကတော့ကွုံနရေဦးမှာပါ။ သူမြားတှရေဲ့နှလုံးသားကိစ်စတှေ၊ ပွဿနာကိစ်စတှကွေားမှာ ကိုယျကဓားစာခံဖွဈဖွဈနတေတျပါတယျ။
ကိုယျကသံယောဇဉျ မကငျးနိုငျတဲ့သူတှကွေောငျ့ပိုပွီး စိတျညဈရမယျ၊ ဒါတှကွေောငျ့လညျး အခဈြနဲ့ပတျသကျတဲ့ကိစ်စတှကေို ပိုပွီးစိတျကုနျလာတာပေါ့။
အခဈြနဲ့ပတျသကျပွီး ပြျောစရာအကောငျး ဆုံး ကာလပါ။ ခဈြသူနဲ့စိတျသဘောထားခွငျးတိုကျ ဆိုငျပွီး အပူအပငျမရှိ သာယာကွညျနူးရမယျ၊ ခဈြသူ ဟာ ကိုယျ့အလိုကိုလိုကျမယျ၊ ကိုယျလုပျဆောငျတဲ့ ကိစ်စတှမှောပါဝငျကုညီဆောငျရှကျလရှေိ့မယျ။
ခဈြသူထံကလဲ အဖိုးတနျလကျဆောငျတှရေမယျ။ခဈြသူမဖွဈသေးယငျလဲ ကိုယျကစှဲလမျးနေ သူရဲ့ခေါငျးညိတျအဖွစေကားကို ကွားရမယျ၊ ခဈြသူ ဟာကိုယျ့အလိုဆန်ဒကို လိုကျလြောလှနျးတာကွောငျ့ သတိတရားတော့ရှိရမယျ၊
ခဈြသူအပျေါ စောငျ့ထိနျး ရမယျ့ သိက်ခာတရားကို စောငျ့သိရမယျ မဟုတျရငျ တော့ကြူးကြူးလှနျလှနျတှဖွေဈပွီး စိတျညဈရပါမယျ၊ ကိုယျကထိနျးသိမျးတာတောငျမှတဈခွား မိနျးကလေး တှရေဲ့အဖကျြစကားကွောငျ့ ဒုက်ခရောကျရှိတတျ ပါ တယျ။
ခဈြသူဟာကိုယျအပျေါကိုမကောငျးမွငျနလေိမျ့မယျ၊ သံသယတှဝေငျနတေယျ ဆိုပါတော့၊ သူ့ဆီက မြှျောလငျ့ခကျြ တဈခုခုကွောငျ့ဟနျဆောငျအခဈြနဲ့ ခဈြနတေယျလို့ထငျနတေယျလေ။ ဒီတော့ သူက နာကငျြနလေိမျ့မယျ။
ကိုယျကမဖွရှေငျးနိုငျတဲ့ ပွဿနာတှေ လုပျဆောငျတာကွောငျ့ပဲဖွဈစေ၊ သူကမကွိုကျတာတှေ ကြူးလှနျလို့ပဲဖွဈစေ၊ တဈယောကျ နဲ့တဈယောကျ ကတောကျကဆဖွဈပွီး မုနျးကွရတတျပါတယျ။
ကိုယျကိုယျနှိုကျကလညျးတခွားအဆငျမပွစေရာတှေ၊ စိတျညဈစရာတှကွေုံနရေတာကွောငျ့ သူ့ရဲ့ပွဈတငျပွောဆိုမှုကို မခံနိုငျပဲ အတိုကျအခံတှေ ဖွဈလာတတျတယျ။ ဒီအတိုကျအခံတှရေဲ့ နောကျဆုံး ရလဒျကတော့ သံယောဇဉျကွိုးလေးပွတျတောကျသှားရခွငျးပါပဲ။
ခဈြသူဆီက အခဈြအဖွကေိုတောငျးခံငံ့လငျ့နသေူတှအေတှကျတော့ ဒီနှဈထဲမှာ စိတျခမျြးသာရမယျ့အဖွေ မရရှိနိုငျဘူး၊ သူဟာ ကိုယျ့ရဲ့စကားတှကေို မယုံမကွညျဖွဈနသေေးတယျ။ ပွီးတော့ကိုယျ့ရဲ့ အားနညျးခကျြတဈခြို့ကွောငျ့ အထငျသေးပွီးခဈြဖို့ မဝံ့မရဲဖွဈနတေတျပါတယျ။
ကိုယျခဈြနတေဲ့သူဆီက ခဈြစကားအဖွပေေးရနိုငျသလို ညီမတို့အဖို့လဲ ကိုယျစိတျဝငျစားနတေဲ့သူနဲ့ ခငျမငျရငျးနှီးပွီး ခဈြစကားပွောလာတာကို ကွားရမယျ။ တကယျတော့ ဒီကာလဟာ ခဈြသူနှဈဦး အတှကျ ပြျောစရာအကောငျးဆုံး သာယာခမျြးမွဖေို့ အကောငျးဆုံးကာလပါ။ ခဈြနပွေီးသူတှေ။
လကျထပျဖို့ တာစူနကွေသူတှဆေိုရငျတော့ ဒီနှဈထဲမှာ ထိမျးမွားဖို့ အခွအေနပေေးတကျပါတယျ။ ဘယျလို အနှောငျ့အယှကျမြိုးတှပေဲ ရှိနနေေ၊ လကျထပျဖို့စီ စဉျထားရငျ မလှဲမသှအေောငျမွငျမှာပါ။ခဈြသူဘဝမှာ ပြျောရှငျကွညျနူးရသလို တဈဘကျကလညျး ရာထူးတကျနိုငျတယျ။
စာမေးပှဲတှေ အောငျနိုငျတယျ။ ဆောငျရှကျထားတဲ့ ကိစ်စတှပွေီး ပွတျနိုငျတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ တဈခွားလူမှုရေးသောက၊ စီးပှားရေးသောက ပညာရေးသောကတှေ ကငျးစငျနတောကွောငျ့ အခဈြနဲ့ပတျသကျပွီးစိတျကူးသမြှ အကောငျအထညျဖျောပွီး ခဈြနိုငျကွပါတယျ။
အားလုံး အဆငျပွေ ကွပါစေ…credit ; Ref; Sayar Dagon
Categories ဗေဒင်နက္ခတ် Post navigation